China Semi-Automatic richigadzirisa Line fekitari uye bhizimisi | Sofiq
Semi-otomatiki richigadzirisa Line ndiyo yakakodzera michina mukuwanda kugadzirwa kweiyo foundry fekitori. Zvakanakira iko kushoma kwekudyara, kudzoka nekukurumidza, kudzikisira kushanda kwesimba, kusimudza mhando, kukanda mashandiro uye kugadzirisa
Semi-otomatiki richigadzirisa Line ndiyo yakakodzera michina mukuwanda kugadzirwa kweiyo foundry fekitori. Zvakanakira iko kushoma kwekudyara, kudzoka nekukurumidza, kudzikisira kushanda kwesimba, kusimudza mhando, kukanda mashandiro uye kugadzirisa.
Mhando yeiyo yekuumba mutsara inogamuchira iyo joet-svina yekuumba muchina, iyo mold inoendesa kufambisa ichikanda muforoma enda pakudurura neinotonhorera. Mushandi kutakura chinu uye jecha muforoma kuburikidza mhepo yakaturikwa, uyewo chinoumba zvekupfakira, machisi chinu, uye kudira nezvimwewo, muitiro vave Semi-otomatiki oparesheni, chinotenderera muchina kudzoka chinu.
Mahombekombe makuru ekushongedzwa anotevera:
Semi-Automatic richigadzirisa Line (maererano chinu kukura).
Nzira mbiri mweya yakaturika.
Kuchengeta mhete njanji, Ndiro etc.
Kudonha jecha muchina.
Dzosera chinu chinotakura chinotenderera muchina.
Dende (imwechete rusvingo, zvinhu: ductile iron).
Muchina uyu, iyo michina yakakwenenzverwa yekuumba mutsara, inoita maitiro akasiyana senge kuumba, musimboti wekuzadza, kukanda, chinu chakazungunuka chibatanidzwe pamwechete kuti dzigadzire padhuze. Ndiyo yakakodzera michina yekuziva iyo yekuumba michina uye otomatiki. Kazhinji, inoramba ichienderera mberi, asi inogona kuve danda rekufamba dhizaini zvakare sekudikanwa. Hurefu hwese uye marongero anoenderana nesarudzo yekuumba uye mamiriro emusangano.
The Specification Of Semi-Automatic richigadzirisa Line
Pashure: Semi-otomatiki Kudira Machine
Zvadaro: Kunofambira mberi kumanikidzwa richigadzirisa Line
Chinwiwa richigadzirisa, Chinwiwa Mould Machine, Punch Out Muchina, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Sandbox, Richigadzirisa vachikanda chinu,